पूर्वाधारमा केन्द्रित वर्ष | Epradesh Today
Homeफिचरपूर्वाधारमा केन्द्रित वर्ष
पूर्वाधारमा केन्द्रित वर्ष
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल असारमा भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय सरकार अहिले पूर्णरुपमा क्रियाशील रहेको छ । धेरै अपेक्षा, योजना र आश्वासन बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहहरुको एक वर्ष कसरी बितेको छ ? एक वर्षको अवधिमा अपेक्षा अनुसारको स्थानीय तहमा काम हुनसकेको छ की छैन ? कस्ताखालका समस्या, चुनौती, जटिलता, अवसर भूमिका देखिए त्यो विषयमा विशेषरुपमा आज हामीले जनप्रतिनिधिका एकवर्ष अन्तर्गत खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । यो अंकमा बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीसँग उनी निर्वाचित भएपछिको एक वर्षको अनुभवका बारेमा कुराकानी गरेकौ छौँ ।
निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष व्यतित भएको छ । यस अवधिमा हामीले बंगलाचुली गाउँपालिकाको स्रोत साधनलाई अत्याधिक परिचालन गरी गत आर्थिक वर्षमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने कोसिस गरेका छाँै । स्थानीय सरकार गाउँ–गाउँमा भने झै यहाँका गाउँपालिकाबासीहरुको अनगिन्ती आवश्यकता, चाहना र समस्याहरु एकै वर्षको प्रयासबाट पूरा हुने सम्भव थिएन् । हामीले यहाँको स्रोतले जति समेटन् सक्छ त्यति गरेका छौँ । हाम्रो काँधमा जनतका वषौंदेखिका अधूरा सपना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको उपलव्ध सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी जनताका विकासका चाहना पूरा गर्ने, जनतलाई परिवर्तनको महसुस गराउनु र समृद्ध बंगलाचुलीको निर्माण गर्ने रहेको छ ।
पूर्वाधारमा एक वर्ष
हामीले यातायात पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थियो । जनताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर यातायातलाई विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ । खाडा–मर्पेस–पुरुङ–जुमलेपानी–श्रवारी–दाङवाङ–रिभान–मसुरे–मुर्कुटी सडक निर्माण (सहिद अजय भरत कृषि मार्ग)को योजना सम्पन्न ग¥यौँ । त्यस्तै मुर्कुटी सडक निर्माण (सहिद अजय भरत कृषि मार्ग)को काम पनि सम्पन्न भएको छ । मर्पेस–पुरुङ–जुमलेपानी–श्रवारी–दाङवाङ–रिभान–मसुरे–मुर्कुटी सडकअन्तर्गत वडा नं ३ को श्रीवारी–दाङवाङ–रिभान खण्डको काम सम्पन्न भयो । वडा नं ६ को मुर्कुटी सडक निर्माण, वडा नं ५ को मसुरे–मुर्कुटी खण्ड, मुलावारी–छापडाँडा (पुठाखोला–प्यूठान जस्पुर जोडने सडक, मुलावारी–हासिपुर–जवरकोट बिर्खे सडक निर्माण (वि.पी. मार्ग वडा नं ८) मुकुटी–बसै–झेलखोल–छापडाँडा–गोविन सडक निर्माण (गणतन्त्र मार्ग) का यातायात पूर्वाधारका काम सम्पन्न भएको छ ।
झेलनेटा–फलिदे–कोल–अर्जुनखोला सडक निर्माण (सहिद पुन्य मार्ग), पिपलडाँडा–तल्लोछाप जोडने सडक निर्माण (सहिद डेम मार्ग), मर्पेस–सैघा जोडने सडक निर्माण (वडा नं नं.२) सहिद सुवास मार्ग, दाङवाङ भित्रि सडक निर्माण, गहतेरा–भेडावारी–तिखेचुली सडक निर्माण, भेडावान्ने चौर–गौरवारी–ढवरास सडक निर्माण, बचेनी भिमसेन टोलदेखि बालशिक्षा भवन जोड्ने सडक, बिर्खे–कोइराले जोडने सडक निर्माण । हर्नोक पाखापानी सडक निर्माण, मसुरे खोला–अमारे सडक मर्मत, तिमिले–गदारी सडक मर्मत, हासीपुर–सालबास सडक निर्माण, पाखापानी–बोझपोखरा, उझा–देवस्थान मोटरवाटो मर्मत, पालुथान–सिस्नेखोला–धरमपानी–पुरुङछेडा मोटरबाटो निर्माण, मुलाबारी–तिखेचुली–कात्तिके–भेडावरी–कुइजा हँुदै बाघ खोर जोड्ने सडक निर्माण, पोखराडाँडा–भिरुना–लेकतापा–ठााटिचौर–अरङखोला प्यूठान मोटरबाटो निर्माणलगाएतका यातायातका पूर्वाधारहरु निर्माण भएको छ ।
शांखलाचौर–खारखोला हुँदै बाघखोर जोड्ने मोटरबाटो, पुरुङछेडा–फाँटा हुँदै गदारी सडक निर्माण, जुमलेपानी–कुमाल टोल–रावल टोल हुँदै जौलेबाँझ लोतपोखरी जोड्ने सडक निर्माण, गहतेरा–मानाखोला–कमिरेचौर सडक निर्माण अर्जुन खोला–बरडाँडा–रोनिडाँडा–झेलनेटा मोटरबाटो निर्माण, मुुर्कुटी–मसुरे मोटरबाटो निर्माण, दिप–रिभान–भुटनेटा–अमारे सडक निर्माण, बिर्खे कोईराला सडक निर्माण, स्वामिघाटदेखि टिकुली दमार स्याला हुँदै गोठीवन जोड्ने मोटरबाटो निर्माण, तल्लो रानीवास–डाँगीबारी–हाँसीपुर हुँदै बिर्खे जोड्ने मोटरबाटो निर्माणलगायतका यातायात पूर्वाधारको योजना काम सम्पन्न भएको छ ।
उझामन्दिर खानेपानी योजना, मर्पेस लिफ्ट खानेपानी योजना, छहरे खोल बाचेनी लिफ्ट खानेपानी योजना, रुपखोला–लेकतापा लिफ्ट खानेपानी योजना, ढुङ्गेरह–रोकिन डाँडा खानेपानी योजना, जोरढाँटी दारेगैरा खमारी खानेपानी योजना, जुम्रा खानेपानी योजना, झिंगा लिफ्ट खानेपानी योजना, बिर्खे लिफ्ट खानेपानी योजना, देउराली डाँडा–गोठीवन लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । नारेखोला खानेपानी, योजना काभ्रे, मागका आधारमा खानेपानी पाईप, बढिखोला–बढिपोखरा पुरुङ खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै दुबे खानेपानी टंकी निर्माण, सरेपानी–सानादाङवाङ–भुज्रेत्रेनी, दीप, पट्टाचौर, धनडाँडा पट्टाचौर टली टोल र डबल पधेर खानेपानी निर्माण योजना, तापाको दरेखोला खानेपानी टंकी निर्माण, पुरुङ–तापा–फाँटा–काभ्रे गाउँका खानेपानी योजना जीर्ण अवस्थामा रहेका पाईप खरिद मागको आधारमा, कल्लेरी खानेपानी आयोजना, अदुवारी टोल खानेपानी निर्माण, चिसापानी खानेपानी लिफ्ट, सालखट्टी खानेपानी निर्माण सेवा, वडा कार्यालयको लागि आवश्यक खानेपानी पाइप तथा टंकी खरिद लगायतका योजना सम्पन्न भएका छन् ।
कब्जा–मुलावारी–ज्यामिरे सिंचाई कुरो निर्माण, मसुरे सिंचाई कुरो निर्माण, फाँटा–छरे सिंचाई कुलो निर्माण, मसुरे खोला–अमारे सिंचाई कुलो निर्माण, टिकुली दमार–ढाँरखोली सिंचाई कुलो निर्माण, मानखोला–तल्लो गहतेरा सिंचाई कुलो निर्माणलगायतका सिंचाईका कामहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी ठूलो खोला–काभ्रो सिंचाई योजना निर्माण, बिर्खेखोला–ढाव सिंचाई कुलो निर्माण, आमडाँडा सिंचाई पोखरी निर्माण, राङजाङ सिंचाई पोखरी निर्माण बचेनी वर्षेपानी संकलन पोखरी निर्माण, रानी थुम्की लेख वर्षे पानी संकलन पोखरी निर्माण, गहतेरा उपल्लो सिंचाई कुलो निर्माण, जेलवाङ सिंचाई आयोजना मर्मत, मसानघाट भिरिङबोट सिंचाई मर्मत, खाम्चा सिंचाई मर्मत, दमारे कुलो सिंचाई निर्माणको योजना सम्पन्न भयो । त्यस्तै दमारे कुलो सिंचाई निर्माण, भुल्के सिंचाई पाईप खरिद लगायतका योजना सम्पन्न भएको छ ।
बंगलाचुली पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, गढिलेख पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, केवलकार स्थापना सम्भाव्यता अध्यन, एकीकृत बस्ती विकास कार्ययोजना सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको छ । त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकाको विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, रानी थुम्की पर्यटकीयस्थल भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएको छ । कालीका मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, विभिन्न पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माण तथा पर्यटनसम्बन्धी तालिम भएका छन् ।
हामीले बंगलाचुली गाउँपालिकाको सामाजिक विकासतर्फ पनि बजेट छुट्याएका थियौँ । हामीले महिला, जनजाति अपाङ्गता भएकाहरुको लागि सीप विकास कार्यक्रमहरु राखेका थियौँ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि विभिन्न काम गरेका छाँै । विद्यालयको भौतिक निर्माण, भौतिक सुधारलगायतका कार्यक्रमहरु गरेका छौँ भने स्वास्थ्यतर्फ पनि योजना सम्पन्न भएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ भने, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारका कामहरु सम्पन्न भएका छन् ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका बासीलाई आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रणालीको शुरुवात गर्ने तथा स्थानीय बाँझो जग्गाहरुलाई खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रमहरु गरेका थियौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेशमै व्यवसायिक सीप तथा तालिमहरु गरेका थियाँै । एक गाउँ एक कृषि कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्येक बस्तीमा कृषक–प्राविधिक भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियाँै । खेतीयोग्य बिशेष क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गरी प्राङ्गारिक खेती बिस्तार गर्दै आधुनिक कृषि पद्धतिको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको विकासको लागि काम सम्पन्न भएको छ । बंगलाचुलीका विभिन्न क्षेत्रहरुको पहिचान गरी विशेष क्षेत्रलाई गाई, भैसीपालन, बाख्रापालन, माहुरी पालन, कुखुरापालनलाई पशुपालन उद्योगको रुपमा विकास गर्न लागि योजनाको काम शुरु भएको छ ।
वन तथा खनिज
बंगलाचुली गाउँपालिकामा रहेका वनको संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका सामुदायिक वनसँगको समन्वयमा तयार गरी कार्यान्वयनको क्रममा छ । कृषि, वन र वातावरणबीचको अन्तर सम्बन्धलाई जनस्तरमा लैजान सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । वन संरक्षण तथा वनको दीगो व्यवस्थापन र उपयोग गरी वनजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, जडिवुटी खेतीको विस्तार गर्ने, तथा भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन गरिने काम प्रकृया शुरु भएको छ । खनिजको उत्खनन् तथा वन पैदावारको उपयोगलाई दीगो र व्यवस्थित वनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
हामीले यो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यस गाउँपालिकाको सन्दर्भमा यातायात, विकासको पहिलो पूर्वाधार रहेकोले गाउँपालिकामा निर्माण भएका कच्ची बाटाहरुको स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना चल्न सक्ने गरी सुचारु गर्न दीगो मर्मत सम्हारको व्यवस्था गरिने योजना छ । यहाँका जनप्रतिनिधिको अथक प्रयासबाट कालोपत्रे हुने क्रममा रहेको घोराही–मुर्कुटी सडकको कार्य गुणस्तरीय र समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सहयोग गरिने योजना छ । सार्वजनिक यातायातको सेवा पुग्न नसकेका गाउँपालिकाका अन्य बस्तीहरुमा बाटोको स्तरोन्नती गरी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गराउन आवश्यक पहल गरिने छ ।
खानेपानीका मुहानहरु संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरी खानेपानीको बढ्दो समस्यालाई निराकरण गरिने छ । गाउँपालिकाका आठवटै वडाका विभिन्न स्थानहरुमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न अध्ययन गरी एकीकृत बस्ती विकासको प्रकृया अगाडि बढाइने छ । त्यस्तै कृषिमा जनताको आयस्तर नबढेसम्म विकासको वास्तविक प्रतिफल जनस्तरसम्म पुग्न नसक्ने यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै ‘वस्तुको निकासी समृद्ध बंगलाचुलीबासी’ भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने योजना छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक बन्न उत्पे्ररित गरिने छ । त्यस्तै पर्यटनतर्फ धार्मिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण र संरक्षण गरी अवलोकन योग्य बनाइने छ ।
यस गाउँपालिकाकामा रहेका बंगलाचुली, गडीलेक, धिमधिमे लेक, रानीथुम्कीजस्ता मनोरम चुचुराहरुको विशेष संरक्षण र विकास गरी यस गाउँपालिकालाई आकर्षक गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्दै पर्यटनका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरी जनताको आयस्तर वृद्धि गरिने छ । त्यस्तै सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा लक्षित वर्ग, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, वन, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।